DOWNLOAD မြောက်အမေရိကက F-86 EF SABRE + SP1 FS2004 - Rikoooo
အရွယ် 56.1 ကို MB
downloads ရယူရန္ 15 423
အတွက် FSX သဟဇာတဗားရှင်း ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါဒီ add-on ကိုမူလက FS2004 များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဤတွင်မြောက်အမေရိကက F-86 E / F SABRE + SP1 update ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝ 3D လေယာဉ်မှူးအခန်းနှင့်ဓာတ်ပုံ-လက်တွေ့ကျကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူတစ်ဦးလေယာဉ်ပျံ, အသံများကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မော်ဒယ်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ဒီ add-on ကိုအလွယ်တကူတစ် payware ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျြောရှငျမှုအဘို့အ freeware ရဲ့! ဒါဟာအံ့ဩပါ! တစ်ဦးကရှားပါးဤသည်နေ့ရက်ကာလ ... သူတို့ရဲ့ကြင်နာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် SectionF8 မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဖိုင်ထဲမှာ9နောက်ထပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏တစ်ဦးကိုအထူးအထုပ်ပါဝင်သည်။